အက်စ်အက်စ်ပစ္စည်းနှင့်အတူဆလင်ဒါမှိုဝါယာကြိုး China Manufacturer
Home > ထုတ်ကုန်များ > စက္ကူစက်အဝတ် > ဆလင်ဒါမှိုဝါယာကြိုး > အက်စ်အက်စ်ပစ္စည်းနှင့်အတူဆလင်ဒါမှိုဝါယာကြိုး
Huatao Group မှ silinder မှိုအချင်းနှင့်ဆန့်ကျင်သောဆလင်ဒါမှိုကိုပေးသည်
အဆိုပါဆလင်ဒါမှိုအချင်း: 1.25M, Dia 1.5M, Dia 1.75M, Dia2.0M, Dia 2.5M ။
သံမဏိဝါယာကြိုးကွက် Range count: 10 mesh to 100 mesh ။
အက်စ်အက်စ် Cylinder မို၏အင်္ဂါရပ်ဦးဝါယာကြိုး ld
စက္ကူစက်အတွက် - Cylinder မှိုစက္ကူစက်။
၂) သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုတတ်နိုင်သမျှပိုမိုမြန်မြန်ပြောပြပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်နီယာများကသင့်အားအကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်များပေးပြီးအသင့်တော်ဆုံးကွက်၊ ဝါယာကြိုး၊ အထည် / မျက်နှာပြင် / ခါးပတ်ကိုဒီဇိုင်းထုတ်ပါမည်။
2. Q: ငွေပေးချေမှုသတ်မှတ်ချက်များကဘာလဲ?
A: အချိန်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအသုံးပြုမှုနှင့်စက်ရုံကွဲပြားခြားနားသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ကိုအခြားမည်သည့်ကုန်ပစ္စည်းထက်မဆိုပိုမိုကြာရှည်စွာအသုံးပြုနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သေချာအောင်လုပ်နိုင်ပါသည်။
၅။ မေး - အထုပ်သည်ရှည်လျားသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်လုံလောက်ပါသလား။
သံမဏိဝါယာကြိုးကွက် အက်စ်ယက်ကွက် စက္ကူပြုလုပ်ခြင်းအတွက်သံမဏိဝါယာကြိုးကွက် သံမဏိ Gabion ဝါယာကြိုးကွက် သံမဏိယက်ဝါယာကြိုးကွက် သံမဏိဝါယာကြိုး PVC Coated သံမဏိ Gabion ဝါယာကြိုးကွက် သံမဏိ Gabion ဝါယာကြိုးကွက် Box ကို